Ra’iisal Wasaare Rooble oo shacabka uga digay halista Coronavirus | Dhacdo
Ra’iisal Wasaare Rooble oo shacabka uga digay halista Coronavirus
Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa shacabka Soomaaliyeed uga digay faafitaanka xanuunka COVID-19, oo sida uu qirayba dalka ku soo laba kacleeyay.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa soo duubay muuqaal uu dadka uga diggayo halista xanuunka, isagoona yiri “Walaalayaal, sida aad la socotaan waxaa soo laba kacleeyay xanuunka halista ah ee Coronavirus ama COVID-19. Maalmihii la soo dhaafay waxaa xanuunka u geeriyooday muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwo badana waa uu soo ritay.”
“Sidaa darteed farriinteedu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay jooggaan, gude iyo dibad, waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan, oo aad ka qayb qaadataan xakameynta iyo ka hortagga cudurka halista ah. Si aan nafteena, qoyskeena iyo guud ahaan dadkeena uga badbaadino xanuunkan, fadlan aan raacno tilmaamaha Wasaaradda Caafimaadka iyo khubarada caafimaadka bixinayan, sida fara dhaqa, kala foggaanshaha, xirashada af-xirka ama maaska, in qofka uu is baaro, haddii uu isku arko astaamaha xanuunka, in aan joojino isu imaatininada kulamada waaweyn iyo wixii lamid ah.”
“Waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda caafimaadka, waxgaradka, culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed in ay qaybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada, ee ku aaddan khatarta cudurkan Coronaha.”
“Dowladda waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalidda xanuunkan, waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkan halista ah.”
“Dhammaanteen aan dadaalno, Ilaahay (SWT) waxaan ka baryayaa inuu ummadeena inoo badbaadiyo.”